Ebe nri ngwa ngwa meghere nso m 2022 yana ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ nri kacha mma
Ebe nri ngwa ngwa meghere nso m 2022 yana ụlọ nri nri ngwa ngwa 25 kacha elu na America
By Victoria Akpan TMLT December 17, 2021 Food 0 Comments
- Ebe nri ngwa ngwa meghere nso m 2022 -
Enwere ọtụtụ ụlọ nri ngwa ngwa na USA. Agbanyeghị, ịhọrọ ebe nri ngwa ngwa kacha mma dị m nso nwere ike bụrụ ihe ịma aka, ọkachasị maka ndị ọhụrụ na-akwaga United States of America.
N'ime edemede a, ị ga-amụta maka ebe nri ngwa ngwa pụrụ iche na ụlọ oriri na ọṅụṅụ kacha mma na USA
Kedu ihe ị maara gbasara nri ngwa ngwa?
Nri ngwa ngwa bụ ụdị nri ewepụtara n'ọtụtụ buru ibu nke ebu n'obi na-ere ere, na-emesi ike na "ọsọ ọrụ" karịa njirisi ndị ọzọ metụtara sayensị.
Nri ngwa ngwa malitere na 1950s na United States ma tolitela na ụlọ ọrụ ijeri $255.
Ọtụtụ ndị arọ nri ngwa ngwa, dị ka McDonald's na Taco Bell, emeghị 25 kacha elu na ọkwa anyị n'ihi ọnụ ọgụgụ ahịa ha na-ere mbara igwe.
Emepụtara nri ngwa ngwa dịka a azụmahịa ụzọ iji gboo ọnụ ọgụgụ na-arị elu nke ndị njem na-ekwo ekwo, ndị njem, na ndị ọrụ ụgwọ ọrụ bụ́ ndị na-enweghị oge ịnọdụ ala chere nri ha n’ụlọ mmanya ma ọ bụ n’ebe a na-eri nri.
A na-edobe nri esichara mbụ maka ọbịbịa onye ahịa (ọkụkọ rotisserie Market Boston, Little Caesar's pizza, wdg).
Ndị a bụ ụdị “nri ngwa ngwa kachasị ngwa ngwa,” yana oge echere belatara ka ọ bụrụ sekọnd n'ihe gbasara Ebe nri ngwa ngwa meghere m nso 2022.
Ebe nri ngwa ngwa mepere nso Me2022 yana ụlọ oriri na ọṅụṅụ kacha mma na USA
Iji wuo ọkwa ziri ezi nke ụlọ nri nri ngwa ngwa kachasị na America, Business Insider jikọtara ya na Azụmahịa Ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ọkachamara ụlọ ọrụ na-ahụ maka nri na ụlọ ọrụ mgbasa ozi iji nye usoro ọkwa.
Nke a metụtara ozi dị n'isiokwu a.
Anyị lere anya ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 25 n'ime agbụ US kachasị ukwuu wee gosi ha na njirisi atọ nke anyị lere anya dị ka ihe kachasị mma maka nri ngwa ngwa niile.
Ọzọkwa, anyị lere anya na arụmọrụ ego ha, afọ ojuju ndị ahịa, na uru zuru ezu, na-eji data nke ụlọ oriri na ọṅụṅụ anakọtara. Business na ụlọ ọrụ nyocha Technomic nwanne ya.
Chọpụta ihe Chain Food Fat ga-abụ na 2021:
Nke a bụ otu n'ime ebe kacha mma ngwa ngwa-Nri Ebe Mepee Near Me 2022. Chick-fil-A bụ naanị yinye nri ngwa ngwa na America iji nweta ọkwa na ise kachasị elu n'ihe gbasara ihe ịga nke ọma ego, afọ ojuju ndị ahịa, na uru.
Omuma Southern a, nke mepere ụlọ ahịa mbụ ya na New York City, bụ ụdọ nri kachasị na ndepụta anyị yana nke asatọ kachasị na United States n'ihe gbasara ego ha nwetara.
Maka ịsọ mpi, ụlọ oriri na ọṅụṅụ-ọkụkọ eghe agbasawanyela menu ya n'oge na-adịbeghị anya, na-agbakwunye salad kale na broccoli, ahịrị kọfị kacha mma, nri ọhụrụ, na sanwichi anụ ezi-anụ ọhịa.
2. Na-ebuli mkpịsị aka ọkụkọ nke Okpete
Ịzụlite mkpịsị aka ọkụkọ nke Cane pụrụ iche n'otu ihe: ibe ọkụkọ mara mma. Akara ahịa mgbịrịgba tangy sauce, ngwakọta nzuzo nke ndị na-azụ ahịa na-agaghị ezuru ya, bụ ihe na-eme ka ndị hụrụ ibe ha n'anya na-eche echiche.
Nke a bụ otu n'ime ebe nri ngwa ngwa na-emeghe nso m 2022. Otú ọ dị, menu dị warara apụtaghị enweghị azụmahịa: N'afọ gara aga, ahịa mụbara site na 26%.
Ọzọkwa, site na mgbọrọgwụ Louisiana ya, ụlọ ọrụ ahụ agbasawo na South na Midwest.
Nke a bụ otu n'ime ebe nri ngwa ngwa kacha mma mepere nso m 2022. Emeghere ebe nchekwa hamburger izizi California na 1948.
Ma iguzosi ike n'ihe ahịa mara na ọ bụrụ na ha chọrọ ịgbasa nhọrọ ha, ha nwere ike ịtụ anya menu na-abụghị nke nzuzo - ọ nwere ihe ndị dị ka burger protein protein na cheese grilled.
Enwere ike ịhụ In-Out naanị na West Coast. Ma e nwere ezi ihe kpatara nke ahụ. Ebe ọ bụ na agbụ ahụ na-anya isi n'inye ihe ndị kachasị mma na-enweghị mgbakwunye ma ọ bụ ihe nchekwa, ụlọ ahịa niile ga-adị n'ime kilomita 300 nke akụrụngwa nkesa.
4. Ndebanye aha ụlọ ọkụ
Firehouse Subs na-aga n'okporo ụzọ ụgbọ oloko, onye isi asọmpi ya, nwere sanwichi nwere obi ike, jiri anụ na chiiz mara mma jupụta, ma chọọ ịbawanye ọnụ ọgụgụ mpụta ya okpukpu abụọ n'afọ 2020.
Agbụ ahụ mụbara ego ha nwetara site na 17% ruo nde $110 na 2015 wee gbakwunye mpụta 93. Ọzọkwa, ọ ga-amasị gị ịmara na nke a bụ otu n'ime ebe nri ngwa ngwa kacha mma mepere nso m 2022.
Otú ọ dị, àgwà adịghị emebi; Ha họọrọ ụlọ ọkụ mbụ n'etiti ụlọ ọrụ niile na-eri nri ngwa ngwa n'ihe gbasara afọ ojuju ndị ahịa.
Ụmụnna abụọ ndị bụbu ndị na-agbanyụ ọkụ bụ́ ndị chọrọ iweta ịnụ ọkụ n’obi na agụụ nke ụlọ ọkụ ahụ n’ụlọ nri ha hiwere ụdọ ahụ dabeere na Florida na 1994.
5. Enyemaka Jersey Mike
Jersey Mike's Subs mere mmemme mmeghe nke ebe 1,000th ya n'ọnwa Ọktoba gara aga ma tinyegoro ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụlọ ahịa 50 ọzọ na ụgbọ mmiri ya.
Yinye Sanwichi na-eto ngwa ngwa na-ezube ịga n'ihu na mgbasawanye ya ngwa ngwa, na-achọ mkpokọta 2,000 site na 2019.
Otú ọ dị, a maara ya maka subs ejiri aka mee nke jupụtara na ihe ndị dị elu. Ọzọkwa, Jersey Mike's bụ ọkacha mmasị ndị ahịa, na-enweta ọkwa afọ ojuju ndị ahịa 10 kacha elu site na Technomic. Ma ọ bụ otu n'ime ebe nri ngwa ngwa kacha mma mepere nso m 2022.
Na 1937, onye nchoputa Krispy Kreme Vernon Rudolph ji uzommeputa nke onye isi nri New Orleans nyere ya. Nke a bụ iji nyere ya aka ime na ire donuts n'ụlọ ahịa nri obodo. Krispy Kreme bụkwa otu n'ime ebe nri ngwa ngwa kacha mma mepere nso m 2022.
Ka isi donut eghe ọhụrụ na-abata n'okporo ụzọ. ahịa malitere ịrịọ ka o zụtara nri ndị ahụ ozugbo, n'ihi ya, Rudolph wepụrụ otu oghere n'ahụ mgbidi iji meghee ebe mbụ ọ na-ere ahịa.
Krispy Kreme nwere ike bụrụ onye ama ama maka doughnut glazed mbụ ya, mana na Mee 2016, Krispy Kreme kwupụtara atụmatụ ire ụlọ mmanya kọfị kọfị a na-eri nke na-atọ ụtọ dị ka kọfị yinye na ụtọ donut.
Deli nke dabeere na Mississippi bụ ọkachamara na mpaghara na mpaghara ọkachamma America. Ọ si na New Yorker ya na anụ ọka ya, pastrami, na Switzerland na rye ruo West Coast Bánh miya.
Ọ dị mkpa ịmara na nnukwu McAlister's ụlọ oriri na ọṅụṅụ dị na ndịda ọwụwa anyanwụ US. Mana ọ na-achọ ndị mmekọ franchise n'ọtụtụ obodo dị na Wisconsin na Colorado ka ha gaa n'ihu na-eto eto na ọdịda anyanwụ. Ma ọ bụ otu n'ime ebe nri ngwa ngwa kacha mma mepere nso m 2022.
Nke a bụ otu n'ime ebe nri ngwa ngwa kacha mma meghere m 2022. Chain West Coast "The Habit Burger Grill" hụrụ nnukwu mmụba na ewu ewu n'afọ gara aga, gosipụtara site na mmụba 43% na ahịa.
Ọzọkwa, ha kpọrọ obere yinye mpaghara ahụ burger kacha ụtọ na America, dịka nyocha sitere na Consumer Reports, na-eti ndị asọmpi dịka Shake Shack, In-N-Out, na Guys ise.
Habit Burger anaghị akwụsị ebe ahụ. Maa amụma? Agbụ ahụ na-ezube ịga n'ihu na-agbasa karịa West Coast, na ebumnuche imepe ụlọ nri 2,000, nnukwu mmụba sitere na 142 ya.
Na Culver's, ndị na-eri nri nwere ike ịtụ anya imefu ntakịrị karịa ka ha ga-eme na nkwonkwo burger na-agba ọsọ, na nkezi iwu na-agbakọta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ $9.50.
Mana ọ nwere ike ịbara ya uru maka mkpuchi oyi kpọnwụrụ nke yinye na Butter Burgers, burger mbinye aka nke na-enweta aha ya site na glaze nke bọta nke na-ekpuchi bun.
Agbanyeghị, enwere ihe karịrị 500 ụlọ oriri na ọṅụṅụ, Biko rụba ama. O nwere ike isiri gị ike ịchọta Culver ebe ọ bụ na ha nọ na Midwest.
Nke ahụ apụtaghị na azụmahịa siri ike maka yinye, n'agbanyeghị. Ahịa Culver toro 15.5% na 2015, na ọkwa arụmọrụ ego ha bụ nke abụọ na Whataburger. Ma ọ bụ otu n'ime ebe nri ngwa ngwa kacha mma mepere nso m 2022.
Nri nri bụ ihe kacha mkpa na Jason's Deli. Ọ ewepụla abụba trans arụrụ arụ, ọtụtụ MSG arụrụ arụ, na agba, ịchaji na ụtọ niile sitere na nri ya n'ime afọ 10 gara aga.
Na mgbakwunye, yinye a na-enye ngwaahịa ọhụrụ ewepụtara n'ebe ọ nọ ụbọchị isii n'izu yana ihe karịrị iri na abuo nke USDA kwadoro.
Ọzọkwa, yinye ezinụlọ nwere eguzobela ụlọ ahịa na steeti 30 na South na Midwest karịa afọ 40 nke ọrụ. Ọ bụ otu n'ime ebe nri ngwa ngwa kacha mma mepere nso m 2022.
Kedu eriri nri ngwa ngwa ole dị na America?
Ụlọ ọrụ nri ngwa ngwa na America ruru ihe dị ka ijeri $198.9, a na-atụkwa anya na ọnụ ọgụgụ a ga-agafe ijeri $223 n'afọ 2022.
Ọ bụrụ na ị na-eche ole ụgbụ nri ngwa ngwa dị na United States, gee ntị. Enwere ihe dị ka 50,000 gbasasịrị na mba ahụ.
Dị ka olu nke eriri nri ngwa ngwa US anaghị ekwe ka mkparịta ụka ngwa ngwa, nke a bụ ihe ị kwesịrị ịma.
N'okpuru bụ ụfọdụ nkọwa dị oke mkpa gbasara 15 kacha elu ị na-enweghị ike ime na-enweghị. Ma nke a bụ oge ọ bụla uche gị jikọtara na yinye ụlọ oriri na ọṅụṅụ ngwa ngwa na America.
1. McDonald si
Nke a bụ otu n'ime ebe kacha mma ngwa ngwa-Nri Ebe Mepee Near Me 2022. Ọ na-eguzosi ike ka ọ na-aga maka Golden Arches, nke na-anọgide na-adị anya site na No. 1 ngwa ngwa nri yinye.
Ọzọkwa, ebumnuche etinyere n'okpuru nduzi nke CEO Steve Easterbrook na-aga n'ihu na-amị mkpụrụ. Na ego na-akpata n'ozuzu usoro enwetawo ihe dị ka ijeri $1 kwa afọ n'okpuru nduzi ya. Nke a mgbe otu-ụlọ ahịa ahịa na-aga n'ihu na-eme ka obere uto.
Ma rịba ama! N'oge a niile, McDonald's na-aga n'ihu na ebumnuche ya ire ụlọ ahịa ụlọ ọrụ nye ndị franchise.
Nke a bụ otu n'ime ebe kacha mma ngwa ngwa-Nri Mepee Near Me 2022. Ntuli aka site na matraasi ụlọ ọrụ Amerisleep hụrụ American millennials na-eji anya-popping $2,000 na kọfị kwa afọ.
Ikekwe ọnụ ọgụgụ ahụ na-enye nkọwa ụfọdụ gbasara ọnụọgụ mbara igwe nke Starbucks na-aga n'ihu na-ebipụta.
Nnukwu kọfị ejirila afọ gara aga na-ebuwanye ibu n'ahịa ahịa Eshia ma na-akwado atụmatụ gburugburu ebe obibi ya na ntinye ego na ugbo anyanwụ na ikuku.
3. waygbọ oloko
Ihe adịghị egwu na ụzọ ụgbọ oloko, mana ha adịghị mma n'ezie. Akara ahụ mechiri ụlọ ahịa ụlọ 1,000 n'afọ gara aga, ebe ego ha nwetara gbadara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara ijeri dollar.
Agbanyeghị, ụzọ ụgbọ oloko dị na ya ogologo oge. Ma ọ bụ otu n'ime ebe nri ngwa ngwa kacha mma mepere nso m 2022.
Nhazi Fresh Forward nwere ike bụrụ nke kacha nwee nnukwu ọchịchọ-ma dịkwa ọnụ - mmemme na akwụkwọ ndị ahụ, mana ihe ngosi mmalite na-ekwe nkwa.
4. Wendy si
Nke a bụ otu n'ime ebe nri ngwa ngwa na-emeghe nso m 2022. Ọ dị ka Nwanyị Freckled na-achọta ụkwụ ya ọzọ.
Ire ahịa n'usoro laghachiri n'ọkwa ụfọdụ mgbe o jirisịrị ihe karịrị ọkara ijeri dollar tinye ya n'afọ gara aga.
Otú ọ dị, ego ha nwetara abụghị nanị ihe na-eme ka a nwetaghachi akara ahụ nke ọma. N'oge okpomọkụ a wetara ya azụ azụ ole na ole ndị ọzọ, gụnyere Berry Burst Chicken Salad na nkwekọrịta 50-Cent Frosty.
5. Dunkin '
Dunkin nwere ike na-aga nke ọma iji merie n'akụkụ ọ bụla nke America. Ọdịda ikpeazụ, agbụ ahụ wepụrụ "Donuts" site na moniker ya iji gosi njirimara ọhụrụ ya. Nke a bụ akara nke na-agafe otu ọpụrụiche nwere mmasị.
Dunkin' achịkọtala nhọrọ ya dị ụtọ, gụnyere Sanwichi nri ụtụtụ Ike ya na Dunkin' Bowls dabere na akwa. N'akụkụ ihe ọṅụṅụ, yinye ahụ adaberewo na ụtọ zany.
Ọzọkwa, Cosmic COLATTA nwere ọtụtụ hued na-echetara otu mmanya unicorn sitere na onye asọmpi. Ma nke a bụ ebe a na-etinye aka na mmanya mmanya na-aba n'anya ekele maka mmekorita ya na Harpoon Brewery.
Ewebata espresso, oyi-brew na mgbata, na ihe ọṅụṅụ ndị ọzọ na-arụ ọrụ na-egosi na Dunkin dị njikere ịgba aka ọ bụghị naanị ihe amasị Starbucks, kamakwa ụlọ kọfị indie.
6. Obere Siza
Nke a bụ otu n'ime ebe nri ngwa ngwa kacha mma meghere m 2022. Ịbelata abụba nwere ike inyere obere Caesar aka iburu ndị egwuregwu pizza atọ kachasị elu kama ịnyagharị. Na nke a nwere ike ịbụ ikpe dị ka Papa John, n'etiti agbụ isi na mpaghara.
Ụlọ ọrụ nne na nna RBI na-achọ ịghọ otu n'ime nnukwu ụlọ oriri na ọṅụṅụ n'ụwa. Na Popeyes nwere ike ịbụ ụgbọ ntolite kacha mma maka ebumnuche ahụ.
N'ime afọ ole na ole gara aga, ọ gbakwunyere nkeji kachasị ọhụrụ na sistemụ ya n'etiti ụdị RBI. Ma nke a bụ mgbe echiche nwanne nwanyị Tim Hortons emechiela ọtụtụ na Burger King na-achọ oghere ọcha.
Agbanyeghị, n'agbanyeghị atụmatụ mgbasawanye ike ike ndị a, Popeyes ka nwetara oge maka echiche enweghị nsọpụrụ. Dị ka: Asọmpi mbanye awa iri na abụọ. Na igbe igbe na-ebupụta "ọkụkọ nkwado mmetụta uche" na ọnọdụ ya na ọdụ ụgbọ elu mba ụwa nke Philadelphia.
8. Nke Zaxby
Oge akwụsịla maka ndị na-eweta ọkụkọ dabere na Georgia. Ugbu a, Zaxby's achọpụtala onwe ya n'ọchịchọ nchekwa nchekwa nri, yana ọtụtụ ọrịa ịba ọcha n'anya A kọrọ na ya. ụlọ oriri na ọṅụṅụ.
Agbanyeghị na ọ bụ otu n'ime ebe nri ngwa ngwa kacha mma mepere nso m 2022, mara. N'agbata Disemba na June, enwere akụkọ atọ dị iche iche nke ndị ọrụ nwere nje na-arụ ọrụ n'ụlọ ahịa na Kentucky, Florida na South Carolina.
Ihe omume na-aga n'ihu kpuchiri mkpọsa ya "Ndị ikom nọ na Black International" nke gosipụtara Blackened Blue Zalad, Kuki Cosmic Chocolate, na Mello Yello Unidentified Fizzy Object.
Ọ bụla afọ ọrụ n'aka maka Bojangles'. Naanị afọ atọ ka agbụ bisikiiti mpaghara mere mpụta mbụ n'ahịa ahịa, ị ga-anụ nke a.
Ụlọ ọrụ abụọ na-akwụ ụgwọ onwe ha jikọtara ọnụ zụtara ya maka nde $593.7, na-eweghachi akara ahụ na ọkwa nkeonwe. Ma kemgbe ahụ, Bojangles 'ewebatala ọtụtụ ndị C-suiters, gụnyere onye mbụ McDonald's execs Jose Armario na Brian Unger dị ka CEO.
Ọ bụrụ na enwere ụdị nke kwesịrị ihe ngosi TV nke ya, ọ ga-abụ Steak'n Shake. Ọ bụkwa otu n'ime ebe nri ngwa ngwa kacha mma mepere nso m 2022.
Ọ bụ ezie na ozi sitere na ọtụtụ ụdị na-emepe emepe ụlọ ahịa yana ihe nchịkọta nhọrọ ọhụrụ, rịba ama. Akara a na-enwekarị nsogbu, na-atọ ụtọ mgbe niile nwere akụkọ akụkọ n'afọ ọzọ.
Akụkọ akụkọ ndị ahụ sitere na ịgba akwụkwọ maka ụgwọ ọrụ oge agafee ruo na imechi nkeji 44 nwa oge. Ma ha mebiri $1 ijeri n'ofe ebe 600 ya.
11. Papa Murphy
Nke a bụ otu n'ime ebe kacha mma ngwa ngwa-Nri Ebe Mepee Near Me 2022. Papa Murphy's nọgidere na-agbada trajectory na 2018, sliding ise tụrụ na QSR 50 na shuttering fọrọ nke nta 100 na-echekwa gafee ya usoro.
N'ọnwa Mee, MTY Food Group-franchisor maka Pinkberry, Grabbagreen, na Blimpie, n'etiti ndị ọzọ-mechara nweta akara ahụ maka nde $190.
Agbanyeghị, nke a agbagọghị ebe ya dị ka otu n'ime ebe nri ngwa ngwa kacha mma mepere nso m 2022 na USA
12. Pizza Marco
Ọ bụ afọ dị mma maka Marco. Onye ọkpụkpọ mpaghara abanyela ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụlọ ụlọ 900 ma na-achọ ịnọchite Papa Murphy dị ka yinye pizza nke anọ kachasị na US.
N'ime afọ anọ gara aga, ọ si na No. 56 Contender ọnọdụ na QSR 50 na oghere ya ugbu a. Nke a bụ otu n'ime ebe nri ngwa ngwa kacha mma mepere nso m 2022.
13. Nwanne nwanyị Anne
Echiche FOCUS pretzel/nri atụgharịla nnukwu mpịakọta dị elu n'ofe ụlọ ahịa ya n'afọ gara aga. Ọ bụ ya mere o ji bụrụ otu n'ime ebe nri ngwa ngwa kacha mma mepere nso m 2022.
Auntie Anne na-aga n'ihu na-etinye ego n'ime ihe ọ kacha mma - ya bụ, LTO ndị na-anọghị na mgbidi dị ka achicha ụbọchị ọmụmụ, Pretzel nuggets, na Candy Lemonade Mixer slushes.
14. Ụlọ ọcha
N'agbanyeghị ịbụ ndị kasị ochie n'ime ụdọ burger nri ngwa ngwa, White Castle na-agba ọsọ n'ọdịniihu. Ma ọ bụ otu n'ime ebe nri ngwa ngwa kacha mma mepere nso m 2022.
Ọ bụghị naanị na ọ na-akwalite mmepụta menu dị ka ụtọ ọhụrụ na ihe mmịfe na-agaghị ekwe omume, mana ọ na-akwali oke ala.
Ọzọkwa, ebe o guzobela ọnụnọ na-enye ego na mpaghara Las Vegas, rịba ama. White Castle ga-emepe ụlọ ahịa Arizona mbụ ya n'ọdịda a, na akụkụ ndị ọzọ nke ọdịda anyanwụ nwere ike ọ gaghị adị n'azụ.
Nke a bụ otu n'ime ebe nri ngwa ngwa na-emeghe nso m 2022. Atụla anya na iwu "Nnọọ na Moe's!" na-apụ n'anya. Mana njirimara ndị ọzọ nke ika ahụ na-agbanwe.
Ka Moe na-aga n'ihu na-enweta uru mgbe ọ na-ere ahịa, njirimara ya echegharịrị nwere ike ịdị iche na nke ndị Mexico ndị ọzọ na-eme ngwa ngwa.
Ebe nri ngwa ngwa kacha ewu ewu mepere nso m 2022 na America
N'okpuru bụ ụfọdụ ebe nri ngwa ngwa kacha ewu ewu mepere nso m 2022 na US:
O siri ike ịrụ ụka na anyị emebiela nke ọma maka nhọrọ maka ụlọ nri ngwa ngwa na United States.
Gaa n'okporo ụzọ awara awara ọ bụla maka naanị obere oge, ị ga-enwekarị ụdị ụlọ nrụpụta nri ngwa ngwa iji mejuo agụụ gị.
Ụfọdụ n'ime ụdọ nri ngwa ngwa a bụ ndị ama ama n'ụwa niile. Ị ga-ahụ ụdọ ndị a n'ọtụtụ mpaghara ụwa. Na ịhụnanya nke nri ngwa ngwa naanị na-abawanye, otú ahụ ka ọnụ ọgụgụ nke nri ngwa ngwa ụlọ nri.
Agbụ nri ngwa ngwa ndị ọzọ nwere ike ọ gaghị ama ama, mana ha kwesịrị ileta ma ọ bụrụ na ị nwere ohere.
Ma ịchọrọ cheeseburger na fries ndị ama ama n'ụwa sitere na McDonald's ma ọ bụ ihe mkpuchi ọhụrụ sitere na ụzọ ụgbọ oloko, enwere ihe dị n'ebe ahụ ga-amasị ọtụtụ n'ime anyị.
Ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị a, ị na-atụfu ọtụtụ nnukwu nri ngwa ngwa ndị ọzọ ụlọ oriri na ọṅụṅụ ofụri US Iji nyere aka meghee echiche gị wee nweta ụdị ọhụrụ nri ngwa ngwa, mara nke a.
Anyị enyochala ụlọ oriri na ọṅụṅụ kacha ewu ewu na US Ma nke a bụ ka ị nwee ike ịnwale ha n'onwe gị dị ka edepụtara n'okpuru:
McDonald's bụ ụlọ ọrụ nri ngwa ngwa nke America, hibere na 1940 dị ka ụlọ oriri na ọṅụṅụ Richard na Maurice McDonald na-arụ na San Bernardino, California, United States.
Ha kpọghachiri ha baptizim azụmahịa dị ka ihe nkwụnye hamburger, ma mesịa gbanwee ụlọ ọrụ ahụ ka ọ bụrụ aha aha, na logo Golden Arches na-ewebata na 1953 na ebe dị na Phoenix, Arizona.
Na 1955, Ray Kroc, onye ọchụnta ego, sonyeere ụlọ ọrụ ahụ dị ka onye na-ahụ maka aha aha wee zụta ụdọ ahụ n'aka ụmụnna McDonald.
McDonald's nwere isi ụlọ ọrụ mbụ ya na Oak Brook, Illinois. Mana ọ kwagara isi ụlọ ọrụ ya zuru ụwa ọnụ na Chicago na June 2018.
Ọzọkwa, McDonald's bụ nnukwu ụlọ oriri na ọṅụṅụ n'ụwa site na ego ha nwetara. Ọ na-ejekwa ozi ihe karịrị nde ndị ahịa 69 kwa ụbọchị na mba 100 n'ofe 37,855 dị ka nke 2018.
Agbanyeghị, ọ bụ ezie na McDonald's kacha mara amara maka hamburgers, cheeseburgers, na fries french, ndetu. Ha na-egosipụta ngwaahịa ọkụkọ, ihe nri ụtụtụ, ihe ọṅụṅụ dị nro, milkshakes, wraps, na dessert.
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ice cream, Baskin Robbins bụ ụlọ eze ị ga-aga. Nke a bụ otu n'ime ebe nri ngwa ngwa kacha mma mepere nso m 2022.
N'inwe ọtụtụ ihe na-atọ ụtọ nke ụtọ ice cream ka a ga-agụta, anyị na-atụle yinye nri ngwa ngwa a dị ka otu n'ime ebe kacha mma iri nri na mba ahụ.
3. Wendy si
Ọ na-esiri ike ịdepụta ụdọ nri ngwa ngwa kachasị mma, ebe ọ bụ na enwere ọtụtụ. Ọtụtụ ndị ga-arụ ụka na Wendy kwesịrị ịpụta n'elu. Agbanyeghị, ọ bụrụ na anyị na-ekwu eziokwu, 10 kachasị na ndepụta a nwere ike ịbụ nọmba nke mbụ.
Ebe a anyị nwere hụrụ n'anya niile-American redhead. Na nri na Wendy si dị ka a hụrụ n'anya.
Agbanyeghị, naanị ị ga-ekpebi otu ihe mgbe ị na-aga Wendy. Ma nke ahụ bụ: Kedu ụdị ntu oyi ị chọrọ? Vanilla ma ọ bụ chocolate?
Ọ dị mma mgbe ahụ, ndụmọdụ m? Nweta abụọ!
4. Nwanyị Dairy
Nke a bụ otu n'ime ebe nri ngwa ngwa na-emeghe nso m 2022. Anyị na-agụ nyocha ndị ahịa nke Dairy Queen na ọnụ ọgụgụ ka ukwuu na-egbuke egbuke.
Ọtụtụ ndị nwere mmetụta yiri nke ahụ na ụlọ oriri na ọṅụṅụ a na-eri ngwa ngwa nwere "ezigbo mma" na "ezigbo uru maka ego."
Nke ahụ bụ ezigbo ngwakọta mara mma ebe ahụ!
Dị ka nke a, ọ bụrụ na ị nọ na ọnọdụ maka soda oyi ma ọ bụ Blizzard a ma ama, gaa na Dairy Queen maka mkpa ume gị niile.
5. waygbọ oloko
Fred DeLuca dị afọ 17 tọrọ ntọala na 1965, yinye nri ngwa ngwa nke America abụrụla ihe zuru ụwa ọnụ.
Ọ bụrụ na ịchọrọ nnukwu uru maka ego, ụzọ ụgbọ oloko bụ otu n'ime nhọrọ kacha mma maka sub ma ọ bụ sanwichi. Ọ bụ otu n'ime ebe nri ngwa ngwa kacha mma mepere nso m 2022.
N'inwe ụdị achịcha dị ụtọ ịhọrọ site na yana otu egwu egwu Sanwichi, enwere ihe ebe a maka onye ọ bụla.
Na-aga na nnukwu ụlọ ahịa maka ebe ịzụ ahịa? Ọ gaghị ezu oke na-enweghị nkwụsị na Cinnabon.
Nke a bụ otu n'ime ebe nri ngwa ngwa na-emeghe nso m 2022. Ma ọ bụ ebe a na-aga maka ọkụ, gooey, ọmarịcha cinnamon buns na-egbuke egbuke.
N'ezie akụ na ụba anyị na-agba ọsọ na donuts, nri? Ọfọn, ha na-enyere aka! Ọ bụrụ na ị na-achọ nri donuts dị ụtọ, enwere naanị otu ebe ị ga-aga - Dunkin'Donuts!
8. Achịcha Panera
Akpa esi esi ọhụrụ, mac na cheese na-atọ ụtọ. Panera nwere ihe na-emeju agụụ gị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ oge ọ bụla. E nwekwara lemonade ụlọ ha a ma ama nke na-agbada karịa ihe ọ bụla n'ụbọchị okpomọkụ.
Colonel Sanders na-aga n'ihu na-amasị ọtụtụ nde ndị ahịa agụụ na-agụ kwa afọ.
Onye chere na ọkụkọ si na bọket bụ ezigbo echiche bụ onye nwere ọgụgụ isi! Crispy, Kentucky eghe ọma na-eche gị mgbe niile na KFC.
10. izzalọ Pizza
Oh Pizza Hut, oh Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken, na ugbu a Pizza Hut (nwuo maka itinye egwu ahụ n'isi gị).
Site n'ụdị dị iche iche nke crusts, ihe dị iche iche cheesy dị iche iche, na ubi ahịhịa a ṅara n'ọkụ ịhọrọ site na, ọ bụghị ihe ijuanya na Pizza Hut bụ otu n'ime pizzerias na-eduga n'ụwa, ma ọ bụghị naanị US.
11. Burger Eze
Ekele dịrị Eze! Ọ dị mma, Burger King nwere ike ọ gaghị abụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ kacha ewu ewu na nri ngwa ngwa na mba ahụ, mana ọ ka bụ nhọrọ kacha elu maka ọtụtụ afọ agụụ.
Ọ bụrụ na ọ dịtụbeghị mgbe ị gbalịrị ha Whoppers, oge eruwo. Ha ka na-atọ ụtọ dị ka ọ dịbu. Ma, ọ bụrụ na ị na-enwe mmetụta na-akpali akpali, nwalee onye na-agaghị ekwe omume.
Nke a bụ otu n'ime ebe kacha mma ngwa ngwa nri na-emeghe nso m 2022. Ma ọ bụ ozi anyị kwenyere na ị ga-ahụ n'anya!
12. Taco mgbịrịgba
Taco Bell nwere ụfọdụ ndị ahịa na-agbasi mbọ ike n'agbụ nri ngwa ngwa niile. Gaa n'ebe ọ bụla na US na ị gaghị adị anya na chiming nke Taco Bell.
13. Nke Arby
Ọ bụrụ na ị bụ onye hụrụ anụ n'anya, Arby's bụ ebe maka gị. Gaa njem ebe a ma nwalee sanwichi anụ ehi a ma ama. Ị gaghị emechu ihu!
14. nke Domino
Njikọ Pizza anyị nke abụọ na ndepụta a ka Pizza Hut, Domino's, na-eto maka ime pizzas nke ọma na ọnụ ahịa dịtụ mma.
Tinyere nku ọkụkọ ha na-atọ ụtọ na achịcha lava chọkọletị na-atọ ụtọ, Domino's bụ nhọrọ kacha mma maka njem abalị ya na ndị enyi na ezinụlọ.
Na-esote, ọ dị mfe ịhụ ihe kpatara Carl's Jr. ji bụrụ otu n'ime eriri nri ngwa ngwa na America.
Ha nwere ndepụta $5 dum nke ga-enye gị ohere ịnweta ihe dị ka anụ ọkụkọ, cheeseburgers abụọ, na sandwiches ọkụkọ maka naanị $5! Ugbu a nke ahụ bụ nkwekọrịta!
Nke a bụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ ọzọ na-eri ngwa ngwa nke nwere ndị na-akwado ya nke ukwuu. Ma ọ bụ otu n'ime ebe nri ngwa ngwa kacha mma mepere nso m 2022.
Ọtụtụ ndị ahịa ị na-ahụ na Popeyes na-eri nri ebe a mgbe niile. Ma nke a nwere ike ịpụta naanị otu ihe-nri ahụ mara mma ma dịkwa ụtọ nke na-eweghachi gị ugboro ugboro.
Mgbe ị na-aga Popeyes, naanị hụ na ị ga-anwale Sanwichi ọkụkọ.
O doro anya na ọ bara ezigbo uru!
17. Papa John
Na ọnọdụ maka iberi pizza ọzọ? Papa John na-aga n'ihu na-etu ọnụ maka ihe ndị a na-emeziwanye kwa afọ na, jụọ ndị ahịa ọ bụla, na ha agaghị arụ ụka.
Pizza ebe a nwere nnukwu chiiz dị nro ma dị nro iji wepụ ume gị.
Ọzọkwa, ị nwere ike ịhụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ Checkers na Rally n'ụzọ dị otu maịl site na mbinye aka ha n'ụdị checkerboard ojii na nke ọcha na ụda na-acha ọbara ọbara.
Ọzọkwa, checkers nwere ezi fries na mma burgers, ma nke ahụ abụghị naanị! Ha enwetala ụfọdụ milkshakes nri ngwa ngwa kacha mma gburugburu!
18. Ọkụkọ ụka
This is one of the best Fast-Food Places Open Near Me 2022. Chicken Church bụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ ndị America na-eri ngwa ngwa nke na-enye ọkụkọ e ghere eghe n'ụdị ụlọ.
Ha na-ere ụfọdụ ọkụkọ e ghere eghe kacha amasị America kemgbe 1952 mgbe mbụ ha mepere na San Antonio, Texas, n'ofe Alamo.
Aha ha sitere n'eziokwu na ị ga-asị "Chei! Kedu ihe bụ burger!" mgbe ị hụrụ nri gị.
Nke a bụ otu n'ime ebe kacha mma ngwa ngwa-nri na-emeghe nso m 2022. Ma ọ nwere otu n'ime nnukwu ngwa ngwa-nri burgers ị nwere ike ịhụ, otú ị maa agaghị ahapụ agụụ!
Jide n'aka na ị ga-elele menu nzuzo Whataburger tupu ịga! Ọzọkwa, ị nwere ike nweta Whataburger grilled cheeseburger nke ga-agba gị obi.
Wingstop bụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ franchise America ama ama nke nwere azụmahịa dị ọnụ ala na nku na-enweghị ọkpụkpụ na nku ọkpụkpụ.
Ọzọkwa, a maara ha maka ụdị nri nku ha dị ka lemon ose, garlic parm, na atomic ma ọ bụrụ na ịchọrọ ihendori na-esi esi.
21. Nke Zaxby
Nke a bụ otu n'ime ebe nri ngwa ngwa na-emeghe nso m 2022. N'ikwu okwu banyere ọkụkọ e ghere eghe, Zaxby's bụ onye na-achị roost-opekata mpe na South.
Ndị enyi abụọ na-eto eto rọrọ nrọ na steeti basketball nke Statesboro, Georgia, ebe nri ntụsara ahụ na-amịpụta nnụnụ ndị na-ekpo ọkụ n'ụdị dị iche iche (ntụ, nku, wdg). Nke a bụkwa ihe nri Zax na-eri ahụ nke emere n'ụlọ.
Nke a bụ otu n'ime ebe nri ngwa ngwa na-emeghe nso m 2022. Dị ka aha ya na-egosi, yinye ezinụlọ a nwere na North Carolina na Virginia na-enwe mmasị na biscuits.
Dị ka ụlọ ọrụ ahụ si kwuo, ihe ndị a na-eme site na-scratch na-akpọ naanị ihe atọ (ntụ ọka, buttermilk na shortening). Na-atụgharị kwa nkeji 15 ọ bụla, na-ekwe nkwa biscuits na-ekpo ọkụ, na-ekpo ọkụ n'oge ọ bụla.
Nri ngwa ngwa kacha ewu ewu n'ụwa
Ọtụtụ n'ime ụdị nri nri ngwa ngwa America kacha ukwuu dị n'ụwa niile taa. Ụlọ ọrụ na-emepụta nri ngwa ngwa abụghị ihe dịbu otu narị afọ ma ọ bụ ọbụna afọ iri abụọ gara aga.
N'ebe a, anyị edepụtala ụfọdụ nri ngwa ngwa kacha ewu ewu n'ụwa. Ha na-achịkwazi ijeri ijeri dollar US na ego ha nwetara ma were ọtụtụ nde ndị gụsịrị akwụkwọ n'ụlọ ọbịa n'ofe ụwa niile.
Agbanyeghị, ka ị bụrụ otu n'ime nri ngwa ngwa kachasị ewu ewu n'ụwa, rịba ama. Ụlọ ọrụ gị kwesịrị inwe nhọrọ ndị ka mma yana menu dị iche iche.
N'ịnwe obere mmasị, ebe a bụ nri ngwa ngwa kachasị ewu ewu n'ụwa dịka nke Nọvemba 2021 yana ebe nri ngwa ngwa kacha mma mepere nso m 2022:
McDonald's bụ otu n'ime eriri nri ngwa ngwa kachasị n'ụwa. Chiming nọ n'ọkwa nke abụọ bụ nnukwu burger McDonald, na-eso ụzọ ụgbọ oloko n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 1000 obere ebe n'ụwa.
Ruo ụbọchị a, McDonald's nwere ihe karịrị ụlọ ahịa 3,50,00 na mba 118 n'ụwa niile. N'ime afọ ndị gafeworonụ, ire ahịa ya kwa afọ amụbaala karịa akara ijeri dollar 29.
Ọ sụrụ ụzọ echiche nke nri ngwa ngwa. Ma ọ bụ otu n'ime ebe kacha mma ngwa ngwa nri na-emeghe nso m 2022. Ọ dịghị ndepụta nke agbụ nri ngwa ngwa ga-eme ka uche na-enweghị ọbụna a nta kwuru nke McDonald's.
Agbanyeghị, McDonald's bụ onye ama ama maka nri ngwakọta ya nke gụnyere burgers, salads, shakes, desserts, na ndị ọzọ.
Ọzọkwa, n'oge na-adịbeghị anya, McDonald's gụnyekwara ọtụtụ nhọrọ ahụike ka mma, na-eme ka ọ bụrụ otu n'ime eriri nri ngwa ngwa kachasị mma n'ụwa.
2. waygbọ oloko
N'ime ọkara narị afọ gara aga, ụdọ nri ngwa ngwa etoola n'ọnụọgụ, iru, na ego enwetara n'ofe ụwa. Ma nke a bụ n'ihi otu eziokwu dị mfe: ndị mmadụ chọrọ nri dị ụtọ, ngwa ngwa na ọnụ ala!
Tọrọ ntọala na ọkara narị afọ gara aga, ụzọ ụgbọ oloko emeela nnukwu ọganihu ma na-anya isi ihe karịrị ụlọ oriri 33,000 na mba 100 n'ụwa nile.
Enweela mmata ka ukwuu maka nri ahụike, nke butere mpụta agbụka nri ngwa ngwa ahụike gburugburu ụwa.
Ndị na-azụ ahịa ahụike na kalori achọpụtala na ụzọ ụgbọ oloko na-eme nnukwu ọsọ ya na-aga gburugburu ụwa. Na ụzọ ụgbọ oloko ị nwere ike ịtụ anya iri Ọhụrụ.
3. Burger Eze
Yana McDonald's, Burger King etoola ka ọ bụrụ otu ihe na ndị burger na US. Ọ gbasaa ngwa ngwa gburugburu ụwa yana mee ka ọ bụrụ otu n'ime ụdọ nri ngwa ngwa kachasị n'ụwa.
Abụọ gụsịrị akwụkwọ ọbịa na Miami, FL guzobere BK, na 1954. Ewezuga burgers, BK na-enye salads, ịma jijiji, nku, na ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Ọ bụ ya mere o ji bụrụ otu n'ime ebe nri ngwa ngwa kacha mma mepere nso m 2022.
Nke a na-emekwa ka ndepụta nke ebe nri ngwa ngwa kacha mma meghere m 2022. KFC kwesịrị ịdị na ụgbụ nri ngwa ngwa ọ bụla na ndepụta ụwa.
Kentucky Fried Chicken bụ 6th kasị ukwuu. Ọzọkwa, ọ bụ otu n'ime usoro nri ngwa ngwa kachasị ewu ewu n'ụwa. Nke a bụkwa maka nkụkọ ọkụkọ na ara ya ụdị ndịda.
KFC abụrụla ezigbo yinye nri ngwa ngwa mba ụwa. Ọ na-eji achịcha na-esi ísì ụtọ dochie ọkụkọ mbinye aka ya na Malaysia nke a na-esi na chilie, lemongrass na ihe ọṅụṅụ lime.
Anyị niile maara na ọtụtụ ihe nwere ike ime karịa otu iko kọfị. Starbucks na-eduga n'ụzọ niile n'ụwa iji gbasaa ịhụnanya kọfị. Nke ahụ kwa n'ụdị.
Nke a mekwara ndepụta nke ebe nri ngwa ngwa kacha mma mepere nso m 2022. Starbucks bụ akara aha na kọfị nri ngwa ngwa na ntinye n'ofe ụwa.
N'ezie, ọ bụ nnukwu nri ngwa ngwa n'ụwa niile na-ere kọfị pụrụ iche na ọrụ gourmet ndị ọzọ. N'inwe ihe karịrị ijeri $16 na ego ha nwetara na ọnụnọ ya na mba 64, Starbucks adịchaghị mma.
Ọ na-arụ ọrụ na nkwonkwo n'ọtụtụ mba. Ya mere, na-eme ka ọ bụrụ otu n'ime ụlọ ahịa kọfị kacha amasị gburugburu ụwa.
6. Papa John
Nke a mekwara ndepụta nke ebe nri ngwa ngwa kacha mma meghere m 2022. Papa John's bụ otu n'ime agbụ pizza nri ngwa ngwa ama ama n'ụwa. O nwere ihe karịrị ebe 3000 na US naanị.
Papa John na-ekwu na ọ na-enye ụfọdụ n'ime ihe ndị kacha ọhụrụ na toppings na pizzas. Na eziokwu na hype ya, yinye pizza nwere nnukwu ndị ahịa. Ma nke a bụ na ọtụtụ n'ime ha na-enye iwu ha site na ekwentị na n'ịntanetị.
Ya mere, ọ bụ onye tozuru oke ịbanye na ndepụta anyị nke usoro nri ngwa ngwa kacha ukwuu n'ụwa.
7. Noodles na Ụlọ ọrụ
Noodles na ụlọ ọrụ' bụ n'ezie otu n'ime ihe oriri ndị a kacha hụ n'anya na ndị a na-ahụkarị na ngalaba nri ngwa ngwa nke Eshia ma ọ bụ ndị China.
Ebe ọ bụ na ị na-ahọrọ maka hormone ahụ ka mma na ọkụkọ na-enweghị ọgwụ nje iji soro efere noodles ha gaa, Noodles na Ụlọ ọrụ abawanyela n'ọnụ ọgụgụ nke ebe na okporo ụzọ ụkwụ na ebe nri ha.
Ụlọ ọrụ ahụ ewepụla griiz ahụ site na iji mmanụ soybean. Ị nwere ike nweta nnukwu efere noodles nwere protein ndị na-esighị ike, gụnyere ọkụkọ na-enweghị hormone, oporo, beef, na tofu organic.
8. izzalọ Pizza
Nke a mekwara ka ndepụta nke ebe nri ngwa ngwa kacha mma meghere m nso 2022. Otú ọ dị, ọ bụ ezie na ọnụ ahịa Pizza Hut Menu Prices adaala kemgbe ọtụtụ afọ, ewu ewu nke yinye ka bụ otu.
Agbụ pizza ole na ole na-eri ngwa ngwa nwere ike ikwu na ewu ewu ma ọ bụ ego ha nwetara nke Pizza Hut na-enweta kwa afọ. Ihe na-adọrọ adọrọ nke ụlọ oriri na ọṅụṅụ ya bụ n'ihi na ha na-enye ọtụtụ nhọrọ jikọrọ ọnụ na ihe dị iche iche dị ọhụrụ.
9. Taco mgbịrịgba
Ọ ga-abụ ihe ijuanya ma ọ bụrụ na ịnụbeghị maka ụdọ nri ngwa ngwa a. Maka nri ndị Mexico, Taco Bell bụ n'ụzọ doro anya yinye nri ngwa ngwa kachasị ukwuu n'ụwa niile.
N'ihe karịrị ụlọ oriri na ọṅụṅụ 6700 n'ofe ụwa, Taco Bell enweghị mmeri n'ụdị tex-mex nke nri ngwa ngwa nke gụnyere burritos, nachos, tacos, na quesadillas.
Taco Bell bụ onye enyemaka nke Yum Brands Inc. Ya mere, ọ mekwara ndepụta nke ebe nri ngwa ngwa kacha mma mepere nso m 2022.
10. Nwanyị Dairy
N'ịga site na moniker DQ dị mkpụmkpụ, Dairy Queen bụ otu n'ime ụdọ nri ngwa ngwa kachasị na America. Okwu a ma ama na DQ bụ na ha na-eje ozi 'Fan Food' ọ bụghị nri ngwa ngwa'.
Ọzọkwa, ọ na-enye ma nri ngwa ngwa na ihe dị nro na menu ya. Nke a gụnyere burgers, sundaes, milkshakes, nkịta na-ekpo ọkụ, na, na nso nso a, salads.
Ọzọkwa, ihe kacha ewu ewu na menu, Otú ọ dị, bụ ọgwụgwọ frozen Blizzard. Agbanyeghị, ọ bụ ezie na emebere ya laa azụ na 1940s, rịba ama nke a, biko. DQ etoola na ego ha nwetara kwa afọ, ndị ọrụ na ụlọ oriri.
DQ nwere ihe karịrị ụlọ nri 5700 n'ụwa niile. Nke a mekwara ndepụta nke ebe nri ngwa ngwa kacha mma mepere nso m 2022.
Nke ahụ bụ ọnụọgụ ụfọdụ n'ezie nke na-ekwu maka ewu ewu nke yinye nri ngwa ngwa a na-ewu ewu nke ukwuu.
11. Bon Au mgbu
Nke a mekwara ka ndepụta nke ebe nri ngwa ngwa kacha mma meghere m 2022. Bon Au Pain bụ onye ọsụ ụzọ na ọnọdụ nri ngwa ngwa dị mma.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịma ka esi eri nri dị mma na agbụ nri ngwa ngwa, ị kwesịrị ịmalite na menu Au Bon Pain. Ọ na-agụnye ofe dị mma, Sanwichi, salads, na ihe oriri na-ekpo ọkụ nke e ji akwụkwọ nri na ọkụkọ na-enweghị hormone mee.
Ya na isi ụlọ ọrụ ya na Boston, USA; Bon Au Pain nwere ihe karịrị 300 cafes zuru ụwa ọnụ gburugburu ụwa ma na-agbasa n'ike n'ike.
Ihe kacha mma bụ na ị nwere ike ịchọ nhọrọ nri gị dị mma. Ma ọ bụ nri nri ụtụtụ na-enweghị gluten ma ọ bụ nri sodium dị ala ma ọ bụ nri vegan; dị nnọọ skim site na ya menu maka ezigbo nri.
12. Achịcha Panera
N'ihe karịrị ụzọ 1230 gafee US na Canada, Panera Bread bụ otu oke maka ụlọ nri na-eri ngwa ngwa.
Dị ka ị nwere ike nwetalarị site n'aha ya, Panera Bread bụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ na-eri nri ngwa ngwa na cafe na-eme achịcha.
Agbụ ahụ na-enye Sanwichi ndị e ji iberibe achịcha, salads, ofe nwere ọkara, na ọkụkọ na-enweghị ọgwụ nje/hormone na-eme.
Mmasị nri siri ike nke Chipotle na-enye bụ ụgha n'ihi na yinye nri ngwa ngwa dị mma na-etinye gị njikwa.
Nke ahụ pụtara na ị ga-ahọrọ ihe ndị na-abanye na burrito gị. Dị ka ebe a na-eri nri, Chipotle na-enye gị ohere ịgbakwunye tinges nke salsa tomatillo green na fajita veggies na burritos gị.
Taco Del Mar na-eweta ihe kacha mma na nri Mexico nwere ihe ọhụrụ na ahụike. N'ebe a, chee echiche n'ahịrị azụ na ihe ndị ọzọ dị mma karịa ọkụkọ na anụ ehi.
Ọzọkwa, Taco Del Mar na-eji ihe ndị mejupụtara ọka, gụnyere tortillas-ọka wit dum maka burritos ha. Ha ewepụkwala iji mmanu abuba na agwa ha.
Ọbụna nke ka mma, ha na-esi nri taco shell na azụ kama ighe ha.
Nri ngwa ngwa nso m nke na-arụ ọrụ awa 24
Ọ ga-amasị gị ịmata ebe ebe nri ngwa ngwa na-emeghe awa 24 n'akụkụ m? Ọ bụrụ ee, lezie anya na ngalaba a.
Ọ bụrụ na agụụ na-agụ gị n'ime abalị ma ọ bụ n'isi ụtụtụ, ebe a anyị ga-edepụta ụlọ oriri na ọṅụṅụ ngwa ngwa nke na-emeghe 24/7 gburugburu ụwa.
Enwere ụdọ ụlọ nri ole na ole na-enye nri ngwa ngwa awa 24. Enwere ụlọ oriri na ọṅụṅụ burger na ebe Pizza na-arụ ọrụ anaghị akwụsị akwụsị. Ha bụ:
McDonald's nwere ọtụtụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ na-emeghe awa 24 ga-ahapụ gị ka ị rie ogologo ụbọchị dum. Ịchọta ebe nleta McDonald dị nso mcdonalds.com.
2. Steak na maa jijiji
Ọ bụrụ na achọrọ gị maka ezigbo steak n'etiti abalị, lelee ma enwere ụlọ oriri na ọṅụṅụ steak n'Shake bụ nke ahụ. -emeghe nso gi. Anyị nwere ike ịhụ ebe ha na ebe nrụọrụ weebụ ha steaknshake.com.
Ọzọkwa, ụlọ oriri na ọṅụṅụ nke ụzọ ụgbọ oloko na-arụ ọrụ 24/7 n'ebe ụfọdụ. Ọ bụrụ na ị nwere chioma, ị nwere ike ịchọpụta na enwere alaka dị nso ebe ị nọ, gaa ụzọ ụgbọ oloko.com ka ịchọọ ugbu a.
N'ụfọdụ ebe ha, Dominos Pizza na-enye nnyefe nri ngwa ngwa awa 24, banye na Dominos.com ịhụ awa ọrụ n'akụkụ ebe gị.
Ọzọ nnukwu nri ngwa ngwa ụlọ oriri na ọṅụṅụ na anyị ga-kwuru ebe a bụ Dunkin 'Donuts; Gaa na ebe nrụọrụ weebụ ha dunkindonuts.com ma mee ka ha mara ebe ị nọ ka ịchọta a ụlọ oriri na ọṅụṅụ mepere nso ngwa ngwa.
6. Denny si
Ọtụtụ ụlọ nri Denny na-emeghe 24/7. Ị nwere ike ịhụ ozi ndị ọzọ gbasara oge mmeghe Denny ebe a na webụsaịtị gọọmentị nke Denny's dennys.com.
A na-emesi anyị obi ike na ozi dị n'elu na ebe nri ngwa ngwa meghere nso m 2022 nyere aka. Ee, anyị maara!
Biko nwee mmetụta ịhapụ ikwu ma ọ bụ ajụjụ gị na ngalaba nkọwa. Ọzọkwa, biko egbula oge ịkọrọ ya ndị enyi gị na ndị ị hụrụ n'anya.
Tags:ebe ọ bụla ghere oghe iri nri n'akụkụ m, nri ụtụtụ n'akụkụ m, mechie ebe nri, ebe nri ngwa ngwa dị mma dị m nso, nnyefe nri ngwa ngwa nso m, nri ngwa ngwa rie-na nso m, nri ngwa ngwa dị m nso mepere ugbu a, ebe nri ngwa ngwa na nso US, ndepụta ụlọ nri ngwa ngwa, ole agbụ nri ngwa ngwa dị, ole ụlọ oriri na ọṅụṅụ ngwa ngwa dị n'ụwa, ole ụlọ nri ngwa ngwa n'ime anyị 2021, Kedu ụdọ ụlọ nri ole dị na US?, ndepụta ụlọ nri ngwa ngwa, Kedu usoro nri ngwa ngwa kachasị na America?
Ebe 10 kacha mma ị ga-eri na ihe dị mma ị ga-eme na Arizona 2022
Rum kacha mma 2022 maka ebumnuche dị iche iche na-eme ka ikpe maka ịsa nri
Ụlọ oriri na ọṅụṅụ 50 kacha mma nso m 2022 maka mbubata & nbunye ụlọ
Ngwaahịa akpụkpọ ahụ na-emegide ịka nká kacha mma maka ụmụ nwoke karịrị afọ 50 na 2022
Kaadị kredit kacha mma zụrụ 2022: Nnukwu ihe ga-atụ anya n'afọ a
Mgbaghara nwa akwụkwọ nwa akwụkwọ maka ndị gụsịrị akwụkwọ na kọleji 2022
Ebe 20 na-adọrọ mmasị na amaghị ama maka ezumike na Singapore 2022